आज हरिशयनी एकादशी: तुलसीको बिरुवा सारेर चतुर्मासामा भगवान विष्णुको विशेष पुजा किन गरिन्छ ? « Gaunbeshi
आज हरिशयनी एकादशी: तुलसीको बिरुवा सारेर चतुर्मासामा भगवान विष्णुको विशेष पुजा किन गरिन्छ ?
काठमाडौ । प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महीनासम्म गरिने विशेष पूजा शुरु गरिँदै । एक महिनाअघि जेष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ । सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ । आजदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ ।
हरिशयनी एकादशीका अवसरमा बिहानैदेखि राजधानीको बूढानीलकण्ठ, उपत्यकाका चार नारायणलगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ ।